निलम्बनबाट हट्ने कहिले ? - Khelpati
निलम्बनबाट हट्ने कहिले ?
सोमवार, बैशाख २०, २०७८ जितु साउँद
काठमाठौं । अप्रिल २०१६ मा यूएईमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले आन्तरिक विवादको कारण देखाउँदै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारी हस्तक्षप र निर्वाचन प्रक्रियामा आपत्ती जनाउँदै आईसीसीले आर्टिकल २.९ अनुसार क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।
क्यानमा सरकारको हस्तक्षेप रहेकाले संघको चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको आईसीसीको जिकिर थियो । संघको एक समूहले साधारणसभा गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले मान्यतानै दिएन । परिषद्ले क्यानको बेग्लै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गरेपछि निर्वाचित समूह अदालत पुग्यो । क्यानभित्रको आधिकारिता विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेपछि आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि क्रिकेट संघ लामो समय नेतृत्व विहिन हुन पुग्यो । करिब तीन वर्ष नेतृत्व विहिन बनेको क्यानमा ०७६ असोज ११ गते अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द सहितको नयाँ कार्यसमिति आयो ।
नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समितिले क्यानको विधान तयार गरेको थियो । सोही विधान अनुसार आईसीसीको स्वतन्त्र कमिटिलाई नयाँ नेतृत्व लागि निर्वाचनको म्यानडेट दिएको थियो । र, निर्वाचन सम्पन्न समेत भयो ।
क्यानमा नयाँ कार्यसमिति आएसँगै क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास लिइएको थियो । नयाँ कार्यसमितिको पहिलो एजेन्डा नै क्यानलाई आईसीसीको निलम्बनबाट पूर्ण रुपमा फुकुवा गर्नु थियो ।
तर, करिब डेढ वर्ष समय बितिसक्दा समेत क्यान आईसीसीको निलम्बनबाट पूर्ण फुकुवा हुन सकेको छैन ।
आंशिक फुकुवा भएको क्यान अझै आईसीसीको पूर्ण फुकुवाको निर्णयको पर्खाईमा छ । क्यानको नयाँ कार्यसमितिले पूर्ण फुकुवाका लागि आईसीसीसँग बारम्बार पहल गरिरहेको क्यानका सचिव असोकनाथ प्याकुरेल बताउँछन् । उनले पूर्ण फुकुवाका लागि आईसीसीसँग बारम्बार पहल गरेको भएपनि फुकुवा हुन नसक्नुको कारण कोरोना महामारीलाई देखाए ।
यसअघि सचिव प्याकुरेलले बारम्बार विभिन्न मितिमा आईसीसीको बोर्ड बैठकले क्यानको फुकुवा सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर, पछिल्ला आईसीसीका केही बैठकमा भने क्यानको विषयमा कुनै एजेन्डानै पेश हुन सकेको थिएन । अब क्यानको आश जुनमा बस्ने आईसीसीको बोर्ड बैठकमा रहेको सचिव प्याकुरेल बताउँछन् ।
‘फुकुवाका लागि चाहिने जति सबै कागजात आईसीसीलाई पेस गरिसकेका छौ । आईसीसीको बोर्ड बैठक जुनमा बस्दैछ । सो बोर्ड बैठकले केही न केही क्यानको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।’ उनले भने, ‘फुकुवाका लागि पालना गर्नु पर्ने विषय पालना गरि सकेका छौ । आईसीसीको बोर्ड बैठक सधै बस्दैन । निश्चित समय अवधिमा मात्रै बस्ने हो । क्यानमाथिको निलम्बनको विषयमा बोर्ड बैठकलेनै निर्णय गर्ने हो । त्यसैले पनि क्यानको विषय ढिलो भएको हो ।’
उनले थपे, ‘कोरोना महामारीले गर्दा पनि लामो समय कुनै पनि क्षेत्रलाई सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सृजना हुन सकेन । यसले निलम्बन फुकुवामा पनि ठुलो असर गरेको हो ।’
सचिव प्याकुरेलले क्यानले आयोजना गर्ने सबै प्रतियोगिताको रिपोर्ट आईसीसीलाई बुझाएपनि उमेर समूहको बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले जुनमा बस्ने आईसीसीको बोर्ड बैठक अघि उमेर समूहको प्रतियोगिताको रिपोर्ट बुझाइ सक्ने योजना भएपनि पछिल्लो समय बढ्दो कोरोना महामारीका कारण असहज भएको बताए ।
‘हामीले महिला र पुरुषको प्रतियोगिता गरिसक्यौ । उमेर समूहको बाँकी छ । यसै महिनामा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने योजना थियो । तर, पछिल्लो समयको बढ्दो कोरोनाका कारण स्थगित भयो ।’ उनले भने, ‘अब क्यानको सबै गतिविधि स्थगित गरिएको छ । कोरोनाको अवस्था के हुन्छ, त्यसमा अबको योजना र गतिविधि निर्धारण हुन्छ ।’
क्यानले गत महिन मात्रै आईसीसीको डेभलपमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । आंशिक निलम्बनमै रहेको नेपालले ‘आईसीसी डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ अफ दि इयर अवार्ड’ प्राप्त गरेको थियो ।
कोरोना भाईरसको महामारीका दौरान पनि क्रिकेट विकासमा क्यानले गरेको पहल र कदमलाई उच्च मुल्यांकन गर्दै आईसीसीले ‘इनिसियटिभ अफ दि इयर’ अवार्ड प्रदान गरिएको जनाएको थियो । पछिल्लो समय क्यानले राम्रो गरेको मुल्याङ्कन गर्ने आईसीसीले पूर्ण फुकुवाको विषयमा भने कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । नेपालले एसिया क्षेत्रबाट डेभलपमेन्ट अवार्ड पाएको थियो ।
‘हामीले राम्रो काम गर्यौ । यस्तो समयमा पनि क्रिकेट र खेलाडीको विषयमा केही गर्न खोज्यौ भनेर नै आईसीसीले क्षेत्रीय अवार्ड दिएको होला । आईसीसीले पनि गरिरहेको काम कारवाहीलाई नियालीरहेको होला ।’ प्याकुरेलले भने, ‘कसैलाई पनि राम्रो गरिस् भनेर सम्मान गर्नुनै सबैभन्दा ठुलो र खुसीको विषय हो । यो खुसी समग्र नेपाली क्रिकेटको हो ।’
उनले आईसीसीले नेपाललाई नियालीरहेको र क्षेत्रीय अवार्डबाट सम्मानित हुनु नेपाली क्रिकेटका लागि शुभ संकेत रहेको बताए । उनले क्यानमाथिको पूर्व फुकुवाको निर्णयमा आईसीसीको अवार्डले केही टेवा पुर्याउने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘हामीले क्षेत्रीय अवार्ड जितेर आईसीसी ग्लोबल अवार्डका लागि समेत छनोट भएका थियौ । यो शुभ संकेत पनि हो कि यसले क्यानमाथिको पूर्ण फुकुवामा केही फाइदा अवश्य पुग्ने छ । अर्को अर्थ के हो भने अहिले आईसीसी क्यानको कार्यप्रति सकरात्मक पनि छ भन्ने हो ।’
उनले क्यानले धेरै योजना बनाउँदै अघि बढेको भएपनि कोरोनाका कारण गर्न नसकिएको बताए । पछिल्लो समय तयारीमा रहेको मैत्रीपूर्ण खेलहरु कोरोनाकै कारण स्थगित गर्नु परेको उनको धारणा छ । कोरोनाका कारण नेपालले खेल्ने अन्तराष्ट्रिय खेल बारम्बार सर्नुले पनि केही असर परेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश प्रशिक्षकका लागि १६ जनाको अन्तर्वार्ता